Travel to Pineland [ Kalaw ] | Myanmar Travel Guide
by Kyaw Phyo Wai on Jun 15, 2016
ထင်းရူမြေသို့ အလည်တစ်ခေါက် ရောက်မိရာဝယ်
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ နွေရာသီက သိတဲ့အတိုင်း ပူပြင်းလှပါတယ်။ ထို့အတွက် အပူရှောင်ရင်း အေးချမ်းလှတဲ့ ကလောမြေကို ကျွန်တော်တို့ ခရီးဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အမြင့် 4292 ပေရှိတဲ့ ကလောမြို့လေးဟာ ဘေးပတ်လည်မှာရှိတဲ့ အောင်ပန်း၊ပင်းတယ၊ ရွာငံ၊ ညောင်ရွှေ ၊တောင်ကြီးမြို့များထက်အေးပြီး ထင်းရူပင်များပိုပေါပါတယ်။ ထို့အတွက် သူ့ကို Pineland (ထင်းရူးမြေ)လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ ကလောကို တချို့သူများလည်း ရောက်ဖူးကြမည်းဖြစ်ပါတယ်။ အခု Review လေးက ကလောကို Luxury အနေနဲ့ မဟုတ်ဘဲ Budget trip အနေနဲ့သွားခဲ့အတွက် ခရီးသွားရင် အကုန်အကျမများအောင် သိမိတာလေးတချိုု့ပါ။
• ဘယ်လိုသွားရမလည်း •
ကျွန်တော်တို့က မန်းလေးကနေ စထွက့်တာပါ။ ရွှေတောင်ရိုး ခရီးသည်ယာဉ်နဲ့ပါ။ ကလောက ကြားမြို့လေးဖြစ်တဲ့အတွက် ကားဂိတ်၊ ကားကွင်းသီးသန် မရှိတဲ့အတွက် လက်မှတ်ကို မန်းလေး - တောင်ကြီး အထိဖြတ်ရပါတယ်။ လက်မှတ်ခကတော့ ရိုးရိုးဆို 7000ရှိပြီး ၊ VIP ဆို 12000 ပါ။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ရိုးရိုးတန်းဆို ကားနောက်ပိုင်း ကားမူးတာကြောက်တဲ့အတွက် VIP ကနေစီးခဲ့ပါတယ်။ ကြာချိန်ကတော့ မန်းလေးကနေ ည 8 နာရီခွဲ ထွက်ပြီး ကလောကို မနက်3နာရီရောက်ပါတယ်။
မိန်းကလေးဧည့်သည်မျာတဲ့သူတွေအတွက်ဆို မနက်ကားကို စီးဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကြိုတင်စီစဉ်မထားပဲ ရုတ်တရက်သွားတာဆိုတော့ ညကားပဲစီးဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ကလောဆိုရင် မြို့လယ်ဖြစ်တဲ့ Winner Hotel ရှေ့ရပ်ပေး ပါတယ်။ အဲသည်ကနေ ဆိုင်ကယ် Taxi ငှားပြီး မိမိတည်းခိုတဲ့ဟိုတယ်ကို ဆက်သွားလို့ရပါတယ်။ မနက်3နာရီ ဆိုပေမယ့်လည်း ဆိုင်ကယ်Taxi ပေါပါတယ်။ မန်းလေးကနေ ကလောကို စီးလို့ရတဲ့ ကားတွေကတော့ JJ Express , ရွှေတောင်ရိုး၊ ကားတွေဖြစ်ပြီး တောင်ကြီးကားတွေ အကုန်စီးလို့ရပြီး ကလောမှာ ရပ်ခိုင်းရပါမယ်။ ကားစပယ်ယာကိုတော့ winner Hotel ရှေ့ဆင်းမှာလို့ ကြိုပြောထားပေါ့။
• ဘယ်ဟိုတယ်မှာတည်းမှာလည်း •
ခရီးတစ်ခုကိုရောက်ပြီဆိုရင် ပထမဆုံး စီစဉ်ရမှာတော့ နေစရာပါ။ကျွန်တော်တို့ကတော့ Budget အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့တည်းခိုတဲ့ ဟိုတယ်ကို ညွှန်းချင်ပါတယ်။
• Ramonar Hotel •
Superior Room - 35,000 ကျပ်ပါ။
ကျွန်တော်တို့က ကံကောင်းချင်တော့ မိုးရာသီပရိုမိုးရှင်းနဲ့ သွားတိုးမိတော့ Standard room ကို 17500 နဲ့ရခဲ့တာ။ မိုးရာသီဆို ခရီးသွားကုန်ပြီမို့ ကလောက ဟိုတယ်တော်တော်များများ ပရိုမိုးရှင်းပေးကြပါတယ်။ သေချာရှာပြီး ကြိုတင်စီစဉ်သွားရင် စျေးသက်သာနဲ့ ဝန်ဆောင်မူကောင်းတဲ့ ဟိုတယ်ကို ရနိုင်ပါတယ်။ မနက်စာပါ ပါတယ်။ မနက်စာကတော့ ရှမ်း အစားစာရပါတယ်။ အခန်းတွေ အကုန်လုံးက ဘန်ဂလိုတွေပါ။ ကလောနှီးဘုရား၊ ရွှေဥမင်လိူဏ်ဂူဘုရားတို့ကို 15 မိနစ်ခန့် လမ်းလျှောက်ရင်ရောက်ပါတယ်။ မနက်စောစော အပျင်းပြေလမ်းလျှောက်ရင်း သွားလို့ရပါသေးတယ်။ ဟိုတယ်ကတော့ မိသားစုဟိုတယ်လေးပါ။• လိပ်စာက •
အမှတ် (10) ရက်ကွပ်၊ အနောက်မြို့ပတ်လမ်းပါ။ ကလောနှီးဘုရားကို သွားကိုလမ်း ပေါ်မှာပါ။
ဖုန်းနံပါတ် - 08150780
• Kalaw Hill Top Villa •
ကလောမှာ အသစ်ဖွင့်ထားတာ မကြာသေးတဲ့ ဟိုတယ်တစ်ခုပါ။ သူ့မှာ နာမည်ကြီးတာက ကလောရဲ့ နေဝင်၊ နေထွက် ကိုကြည့်လို့ရတဲ့ တစ်ခုတည်းသော Sunset Bar ပါ။ အပေါ်ကနေကြည့်ရင် ကလောအလှကို ပြီးပြည့်စုံစွာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဟိုတယ်မှာ တည်းခိုသူမှ မဟုတ်ဘဲ အပြင်လူလည်း ဝင်လို့ရပါတယ်။ အခန်းတွေအားလုံးက သစ်သားဘန်ဂလိုတွေဖြစ်ပြီး အခန်းခက အခုချိန် 55,000 ပါ။ စျေးနှုန်းသင့်တင့်လှပါတယ်။ ဟိုတယ်နေရာလေးကတော့ ကလော ဘူတာကနေ သွားရပြီး ကလောရဲ့အမြင့်ဆုံး တောင်ကုန်းလေးပေါ်မှာ ရှိပါတယ်။ Superior Room - 52,500
Family suit Room - 10500 ရှိပါတယ်။
ကလော(ဖုန်း) ၊ ၀၈၁-၅၀၃၄၆ ၊ ၀၈၁-၅၀၃၄၇
Email : reservation@hilltopvillakalaw.com, fo@hilltopvillakalaw.com
• ဘယ်နေရာတွေလည်ပတ်လို့ရလည်း •
3. မြင်းမထိလှိုဏ်ဂူ တို့ဖြစ်ပြီး
2. ပင်းတယရှိ ပင်းတယလိူဏ်ဂူနှင့် ပုန်းတလုတ်ရေကန်
3. ရွာငံရှိ မြသပိတ်ရေပြာအိုင်၊ တောကြယ်ရေတံခွန် ၊ မိန်းမရဲသခင်မတောင်
4. ညောင်ရွေရှိ အင်းလေးကန် ၊ ခေါင်တိုင်ရေပူစမ်းနှင့် စပျစ်ခြံ တို့ပါ
တောင်ကြီးကတော့ ကလော ကနေဆိုရင် မိုင် 80 ကျော်ဝေးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ ကလောမှာ စတည်းချပြီး ကလောကနေ အနီးအနားအကုန် ခြေစကြာဖြန့်ကျက်တာပါ။ ကလောနဲ့ အနီးတဝိုက်ကို လည့်ဖို့ ဆိုင်ကယ်ကို တစ်နေကုန် 15,000 နဲ့ ငှားပြီး လည်တာပါ။ ပထမဆုံးအနေဖြင့် ကလောမှာရှိတဲ့ မြင်းမထိဂူ ၊ နှီးဘုရား ၊ ရွေဥမင်လိူဏ်ဂူတို့ကိုတော့ နေ့တဝက်နဲ့တင် လည်ပတ်လို့ပြီးပါတယ်။ View Point ကိုတော့ နေ့တဝက်သွားရပြီး ပင်းတယ၊ ရွာငံတို့ကိုတော့ သွားရင်တော့ တစ်နေကုန်ကြာပါလိမ့်မယ်။ အင်းလေးကို သွားရင်တော့ တစ်နေကုန်ကြာပြီး ကား၊ ဆိုင်ကယ်နဲ့ ကြိုက်တာသွားလို့ရပါတယ်။
ကားခ - 35,000
ဆိုင်ကယ် - 15,000 ပါ။ အင်းလေးနဲ့ ကလောက မိုင် 40 ကျော် ဝေးပါတယ်။
• မြင်းမထိဂူ • ကိုရောက်ရင်တော့ သမိုင်းကြောင်းကိုရှင်းပြနိုင်သူ တစ်ယောက်ပါရင် ပိုအဆင်ပြေမှာပါ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ မိမိဘာသာသွားလို လိူဏ်ဂူထဲဝင်ရင် ဘာမှမသိဘဲ ကြည့်ပြီးပြန်ထွက်ခဲ့ရမှာမို့လို့ပါ။ အဲဒီက ဘုရားလူကြီးကို မေးရင်တော့ အပြည့်အစုံ သိနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တုန်းက ဆိုင်ကယ် Taxi သမားပါလို့ အကုန်ရှင်းပြလို့ နားလည်တာပါ။ လိူဏ်ဂူသမိုင်းကို စာထဲမှာရှင်းပြရရင် တစ်ထောင့် တစ်ညပုံပြင် ဖြစ်သွားနိုင်လို့ပါ။ မြင်းမထိဂူက အောင်ပန်းနဲ့ ကလောကြားရှိ မြင်းမထိ ကျေးရွာမှာပါ။ ကလောကနေ ဆိုင်ကယ်နဲ့ဆို 15 မိနစ်ပေါ။
• နှီးဘုရားနှင့် ရွေဥမင်လိူဏ်ဂူ • ကတော့ အနောက်မြို့ပတ်လမ်းကနေသွားရပြီး နှီးဘုရားကိုတော့ နှီးဘုရားလမ်းကနေ ခွဲထွက်သွားပြီး ရွေဥမင်ကိုတော့ Junction Rose Hotel ဘေးလမ်းကနေ စစ်တပ်ထဲကိုသွားရတာပါ။ ဂူက စစ်တပ်ထဲရှိတာပါ။ ဆိုင်ကယ်နဲ့ ဆိုရင်တော့ ဦးထုပ်ပါမှ သွားလို်ရပြီး စစ်တပ်ပေါက်မှာ ဆင်းတွန်းရပါသေးတယ်။ နှီးဘုရားရောက်လို့် ဘုရားဖူးပြီးရင် ဘုရားလူကြီးတွေက လက်ဖက်၊ရေနွေးကြမ်းနဲ့ ဧည့်ခံပါသေးတယ်။ ရွေဥမင်လိူဏ်ဂူကတော့ ယင်းဂူကနေ ပင်းတယ အထိသွားလို့ ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
• ပင်းတယလိူဏ်ဂူနှင့် ရွာငံရှိမြသပိတ်ရေပြာအိုင် • ကိုတော့ ကလော - အောင်ပန်းလမ်းကနေ ကျုံးကြီးလမ်းခွဲအထိသွားပြီး လမ်းခွဲကနေမှ ပင်းတယတစ်လမ်း၊ ရွာငံ တစ်လမ်းခွဲသွားတာပါ။ ပင်းတယလိူဏ်ဂူနဲ့ ပုန်းတလုတ် ရေကန်ကတော့ အများသိထားကြပြီးဖြစ်မှာပါ။ ရွာငံရှိ မြသပိတ်ရေပြာအိုင်ကတော့ အခုမှာ နာမည်ကြီးလာပြီး ရေကတော့ ပြာလဲ့နေတာပါ၊ ရေထဲမှာ ငါးများကူးခတ်နေတာကို အတိုင်း သားတွေ့ရပြီး ခြေဆေး၊ လက်ဆေး မလုပ်ဖို့ကိုလည်း တားမြစ်ထားပါတယ်။ အခုတော့ ရေပြာအိုင်ဘေးမှာ သံဆူးကြိုးများကာရံနေပါပြီ။ ရေပြာအိုင်အောက်မှာ နောင်ပွင့်မယ့် ဘုရားရှင်အတွက် မြသပိတ်မြုပ်နှံထားတဲ့အတွက် ရေပြာရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ရေပြာအိုင်ကနေ အထက်ကိုဆက်တက်သွားရင် တောကြယ်ရေတံခွန်ရှိပါသေးတယ်။ နောက်သွားချင်သေးရင် ပြဒါးလင်းဂူ လည်း ရှိပါသေးတယ်။ အဲဂူကိုတော့ လမ်းကြမ်းတဲ့အတွက် သိပ်မသွားကြပါဘူး။ ရေပြာအိုင်ကနေ အပြန်မှာ မိန်းမရဲ သခင်မတောင်ကို ဝင်နိုင်ပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်က နေပူနေတာကြောင့် မဝင်ဖြစ်ခဲ့ရပါဘူး။ ရွာငံလမ်းတလျှောက်မှာတော့ ပန်းနှမ်းစိုက်ခင်းတွေက ပင်းတယဘက်မှာထက်ပိုပြီး လှပါတယ်။ အခုမိုးရာသီချိန်မှာတော့ ဂေါ်ဖီ၊ အာလူးတို့ စိုက်ထားပြီး တချို့စိုက်ခင်းတွေမှာတော့ ဒီအတိုင်ပါ။ ဆောင်းရာသီမှ ပန်းနှမ်းတွေ၊ နေကြာပန်းတွေပွင့်ပြီး အရမ်းလှတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
• View Point • ကတော့ နှီးဘုရားအဆင်းလမ်းကနေ ပလောင် တောင်လမ်းခွဲကို သွားရပြီး View Point ကို 45 မိနစ်မောင်းရပါတယ်။ မြေသား ကျောက်ခင်းလမ်းပါ ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဆိုင်ကယ်နဲ့ပဲသွားတာပါ။ လမ်းအဆုံး ထိမောင်းပြီးရင် ကွင်းပြင်တစ်ခုရှိပြီး အဲမှာ ကားတွေထားခဲ့ပြီး2မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်ရင် ဂေါ်ရခါးကြီးပိုင်တဲ့ View Point ကိုရောက်ပါပြီ။ အစားအစာတွေကတော့ ချပါတီနဲ့ နွားနို့ပဲရတာပါ။ ရူခင်းတွေကတော့ အရမ်းမိုက်ပြီး တောင်တွေရဲ့ အထက်ကို ရောက်နေသလိုပါ။ အင်းလေးသို့ Trekking လုပ်သူတွေ ခနနားခိုရာ တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ View Point မှာ လိမ္မော်ပင်လေး တွေလည်းရှိပါတယ်။ ကလောရောက်ရင် View Point ကတော့ မရောက်မဖြစ်အောင် လာရမယ့်နေရာတစ်ခုပဲလို် ညွှန်းချင်ပါတယ်။
• အင်းလေး • ကိုတော့ ကလောကနေ မိုင် 40 ကျော်ဝေးပြီး ဆိုင်ကယ်နဲ့လည်း သွားလို်ရပါတယ်။ ဆိုင်ကယ်နဲ့ဆို 15000 ဖြစ်ပြီး ကားနဲ့ဆို စင်းလုံး 35,000 ပါ။ လမ်းမှာ သစ်တော်သီးခြံတွေကို ဝင်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက် လေ့လာနိုင်ပြီး စိတ်ပါရင် ခူးစားလိုရပါသေးတယ်။ မိမိဗိုက်ပြည့်ရုံပဲ စားလို့ရတာပါ။ အခုရာသီမှာ အသီးတွေက အခုမှသီးစဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို် မစားဖြစ်ခဲ့ရဘူး။ စားချင်ရင်တော့ ဆောင်းတွင်းကိုသွားပါ။ ဟဲဟိုး အကျော်မှရှိတဲ့ နှစ်ပေါင်း 89 နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဘဝသံသရာတံတားကိုလည်း ဝင်လည်နိုင်ပါသေးတယ်။ တံတားကတော့ ဂုတ်ထိတ်တံတားပုံစံပါ။ တံတားပေါ်ကနေ ဟိုးအဝေး အင်းလေးကန်ဘက်မှာရှိတဲ့ မြူတွေ ဆိုင်းနေတဲ့တောင်တန်းတွေနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်ပါသေးတယ်။ အင်းလေးရောက်ရင်တော့ စက်လှေခတော့ သေချာစစ်ပါ။ တစ်ခါတစ်လေစျေးကြီးလွန်းလို့ပါ။
ကျွန်တော်တို့ကတော့ နှစ်ယောက်အပြတ် 25,000 ခွဲပါ။ အစက 40,000 တောင်းပြီး 25000 ခွဲနဲ့တည့်သွားတာပါ။ လည်ပတ်နိုင်မည့် နေရာ ငါး နေရာကတော့
- ငါးဖယ်သိုင်းကျောင်း ( ကြောင်ခုန်ကျောင်း) တို့ပါ။
လက်ဆောင်ပစ္စည်းနဲ့ ချည်ထည်ဝယ်ချင်ရင်တော့ ဖော်တော်ဦးဘုရားအောက်က ဆိုင်တွေက စျေချိုပြီး စျေးနူန်းမှန်တယ်လို် ထင်ပါတယ်။ တခြားဆိုင်တွေကတော့ စျေးကြီးလှပါတယ်။ အင်းလေးကန်က အပြန်မှာတော့ ခေါင်တိုင်ရေပူစမ်းမှာ အညောင်းညာပြေ ရေဝင်စိမ်နိုင်သေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ စပျစ်ခြံသွားချင်စိတ်ကများနေတာကြောင့် မဝင်ဖြစ်ခဲ့ရဖူး။
ငါးဖယ်သိုင်းကျောင်း ( ကြောင်ခုန်ကျောင်း)
• Red Mountain Estate Vineyards and Winery • ကိုတော့ အင်းလေးကနေ7မိုင်ဝေးပါတယ်။ ပင်လောင်းကိုသွားတဲ့ လမ်းဘေးမှာပါ။ ကားဆရာကို အပူကပ်ပြီး လိုက်ပို့ခိုင်းရတယ်။ 0.57 ဧကပေါ်မှာ အပင်ပေါင်း တစ်ထောင်ကျော်ကို 2004 ခုနှစ် စတင်စိုက်ပြီး ၀ိုင်ထုတ်နေတာပါတဲ့။ စပျစ်ခြံရဲ့ ကုန်းမြင့်လေးပေါ်မှာ စားသောက်ဆိုငိရှိပြီး အဲကနေ ဝိုင်ကို မြည်းစမ်းလို်ရပါတယ်။ ဝိုင်လေးသောက်ပြီး ဆိုင်လေးကနေ ဟိုးအဝေးတောင်တန်းတွေကို ကြည့်ရူခံစားနိုင်ပါသေးတယ်။ Sunset ကြည့်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဝိုင်ထုတ်လုပ်တဲ့ အဆောက်အဦးကိုတော့ အပြင်လူဝင်ခွင့်မပေးပါဘူး။ စပျစ်ပင်တွေက မိုးရာသီမှာ အကိုင်းတွေခုတ်ထားတဲ့အတွက် ပင်စည်ပဲကျန်ပြီး အပြန်လမ်းမှာတော့ ခရီးပမ်းနေလို ကားပေါ်မှာ အိပ်ငိုက်ရက်ပေါ့။
• ဘာတွေစားစရာလည်း •
ရှမ်းပြည်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒေသအစားစာစားမယ်ဆိုရင် ကလောမြို့က • ပြည့်ပြည့် ရှမ်းခေါက်ဆွဲ • ကို ညွန်းချင်ပါတယ်။ ကလောဒေသခံ တော်တော်များများကလည်း ယင်းဆိုင်ကို ညွှန်းဆိုကျပါတယ်။ ညွှန်းဆို ဆိုင်မှာ အစားအစာတွေက ရှမ်းလက်ရာ စစ်တွေဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်၊ မန်းလေးမှာ စားနေတဲ့ ရှမ်းအစားစာတွေထက် ကောင်းမွန်လှပါတယ်။ ရှမ်းအစားစာ အစုံရပြီး ဒေသထွက်သီးနှံများဖြင့် ဖျော်ရည်၊ အအေးသောက်နိုင်ပါသေးတယ်။
နောက်ညွှန်းချင်တဲ့ တစ်ဆိုင်ကတော့ • 7sister • ဆိုင် ပါ။ အဲဆိုင်ကတော့ ရှမ်းအစားစာ၊ တရုတ်အစားစာ ရပါတယ်။ ရှမ်းအစားစာမှာတော့ အဲဆိုင် ငါးပေါင်းကတော့ စားကောင်းလှပြီး Trip Advisor ကနေလည်း ဆုရထားပါတယ်။ မိသားစုလို ဆက်ဆံရေးကလည်း နွေးထွေးလှပြီး ရှမ်းအစားစာစားမည်ဆိုပါက မိမိတို့ မရွေးတတ်လည်း သူတို့က ဘာလေးကောင်းတယ်၊ ဘာလေးစားလိုက်လို့ ညွန်းပေးပါတယ်။ 7sister က ပြည့်ပြည့်နဲ့ ဘေးချင်းကပ်ရပ် ပြည်ထောင်စုလမ်းမပေါ်မှာပါပဲ။
နောက်ပြီး ရှမ်းအစားစာ မစားတတ်လို့ မြန်မာထမင်းပဲစားချင်တယ် ဆိုပါက 7sister ဘေးက နည်းနည်းသွားလိုက်ရင် • သုမောင်မြန်မာထမင်းဆိုင် • ကို ရောက်ပါပြီ။ တရုတ်အစားစာရောရပြီး မြန်မာထမင်း၊ ဟင်းစားမည် ဆိုပါက ကြိုက်ရာ ဟင်းတစ်ခွက်ယူ တစ်ပွဲကို 3500 ပါ။ 3500 ဆိုလို့ လန့်သွားလား မိတ်ဆွေ။ မလန့်ပါနဲ့ သူမှာ အရန်ဟင်းတွေက အများကြီးချပေးပြီး မိတ်ဆွေကြိုက်သလောက်စား ကုန်ရင်ထပ်ဖြည့်ပေးမှာပါ။ အရံဟင်းပဲနော်။ ကျွန်တော ်အကြိုက်ကတော့ အဲမှာချပေးတဲ့ ငါးပိထောင်းကို သံပုရာသီးလေးညှစ်စားရတာ ခံတွင်းတွေ့လှပြီး စားသောက်ပြီးရင် အချိုပွဲအဖြစ် လက်ဖက်၊ ကျောက်ကျော စားနိုင်ပါသေးတယ်။ FOC ပါ။ မိုးလေးအေး နေရင်တော့ သူတို့က နှပ်ကော်ဖီ စစ်စစ်လေးသောက်ရနိုင်ပါတယ်။ မတိုက်လည်း တောင်းသာသောက် စိတ်မဆိုးဘူးရယ်။ ဝန်ဆောင်မှုကတော့ ရှယ်ပဲ။ ပြောစရာ မရှိပါဘူး။ ကလောရောက်တစ်ခေါက်ဝင်စားပေါ့ မိတ်ဆွေ။
• အခြားစိတ်ဝင်စားစရာများ •
ကလောမှာ နာမည်ကြီးတာ တစ်ခုက Trekking (သစ်ပင်တောတောင် များကြားလမ်းလျှောက်ခြင်း) ပါ။
1 Day - တစ်ရက်ထဲမှာ ညမအိပ်ရပါဘူး။ နာမည်ကျော် View Point ကို အရောက်ပါ။
2 Days 1 night - ဒေသခံအိမ်မှာ တညအိပ်ပြီး နောက်နေ့မနက်ကျ ရထားနဲ့ကလောကို ပြန်လာမှာပါ။
3 Days 2night - အင်းလေးကန်အထိပါ။ လမ်းခရီးမှာတော့2ညအိပ်ပေါ့။ သူကတော့ပင်ပန်းပါတယ်။ တိုးရစ်တွေကတော့ ဒီ Package ကို အကြိုက်ဆုံးပါ။ လမ်းခရီးမှာ ဒေသခံတွေရဲ့ စိုက်ခင်းတွေ၊ ထင်းရူးတောတွေ၊ ဒေသအစားစာတွေနဲ့ အံသြစရာအပြည့်မို့လို့ပါ။ အပြည့်အစုံသိချင်ရင်တော့ www. facebook.com/uuyelkalawthar ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပြီး 09 258310379 ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ စျေးနူန်းကတော့ တစ်ယောက်(တစ်ရက်) ကို 25$ ပါ။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ မုန်တိုင်းကျပြီး မိုးရွာနေလို့ ဝမ်းနည်းစွာပဲ စီစဉ်ပြီး ဖြတ်လိုက်ရတာပါ။ မလုပ်ဖြစ်လိုက်ပါဘူး။
1. တောစီးဖိနပ်တစ်ရံ(Trekking လုပ်မည်ဆိုပါက)
ကလောရာသီဥတုက အမြဲအေးနေတတ်လို့ပါ၊ မိုးရွာထားပါက အရမ်းအေးနေတတ်ပါတယ်။ မအေးလောက်ပါဘူး ဆိုပီးအနွေးထည်မယူလို့ ကျွန်တော် ခံရပြီးပါပြီ။ ဒီလောက်ပါပဲ။
• အနှစ်ချူပ် •
ကလောမြို့လေးဟာ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် အမြင့်ပေ ၄ ထောင်ကျော်မှာ ရှိတဲ့အမြဲအေးနေတတ်ပြီး ဆောင်းရာသီမှာလာလည်ရန် အကောင်းဆုံး ပါ။ ဒေသထွက်သီးနှံမျိုးစုံ၊ ရူခင်းများကလည်း ပန်းနှမ်းတွေပွင့်ပြီမို့ အရမ်းလှပပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သွားတာ မိုးရာသီ ဝင်တော့မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘာမှမရှိတော့ပါဘူး။ မိတ်ဆွေ မကြုံတွေရအောင်ပါ။ လည်ဖို့ပတ်ဖို့ကတော့ ဆိုင်ကယ်ကို တစ်ရက် 15000 နဲ့ငှားပြီး မိမိကိုယ်တိုင်မောင်းတာပါ။ အင်းလေးအထိတောင်မောင်းလို့ ရပါတယ်။ ဆိုင်ကယ်မစီးဘူး ပင်ပန်းတယ်ဆိုလည်း ကားရှိပါတယ်။ စျေးနူန်းကတော့ အင်းလေကို 35000 ၊ တောင်ကြီးကို 75000 နဲ့ တခြားနေရာများကိုတော့ စျေးနူန်း အစားစားရှိပါတယ်။ အေးချမ်းပြီး လှပတဲ့ရူခင်းတွေ ၊ စိုက်ခင်းတွေ၊ လိမ္မော်ခြံတွေ ၊ စပျစ်ခြံတွေ၊ ၀ိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ ဒေသအစားစားတွေကို စားပြီး လေ့လာချင်ပါက ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းက ကလောမြို့လေးကို လှမ်းလာခဲ့ပါ မိတ်ဆွေ။ ဆောင်းရာသီပဲသွားဖို့ နောက်ဆုံတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။